la thik6 ajha dherai jankari paaine bhaiyo uhaako baremaa
शुरु शुरुमा तपाईको ब्लग प्रतिको लगन र साजसज्जा हेर्दा तपाईलाई फुल टाईम बिद्यार्थी हैन फुल टाईम बल्गर ठानेको थिए मैले पनि! ।
तपाईको स्वअनुभव सबै नया पुराना ब्लगरकालागी यौटा गतिलै जानकारी हुनेछ जस्तो लाग्छ । बाँकी “उतै” कुरा गरौंला है त!
आकारपोष्टको निरन्तरता र सफलताको कामना गर्छु । तपाईको मेहनत तपाईको ब्लगमा प्रष्ट झल्किन्छ ।
"मलाई सँधै अचम्म लाग्ने कुरा के हो भने, कुनै ब्लगर ले केही कुरालाई आफ्नो तर्फबाट मात्रै विश्लेषण गरेको छ भने, हामी पनि हो मा हो नै मिलाइरहेका हुन्छौँ, प्राय: अधिकांश सन्दर्भमा ।"
ठिक भन्नु भो शायद मान्छेले जहिले पनि आफुलाइ मन पर्ने कुरामा मात्रै आफुलाइ सहभागी गराउन खोज्छ । तर हो मा हो भन्दा पनि विश्लेषणात्मक वहसहरु बढि भयो भने ब्लग वा विषयको मजा पनि बेग्लै हुन्छ र निचोड पनि उत्कृष्ट निस्कन्छ ।
'आकार'का बारेमा 'आकार'कै मुखबाट सुन्न पाऊँदा साह्रै खुशी लाग्यो। धन्यबाद "दौतरी"!
साजसज्जा र प्राविधिक कुरामा त 'आकारपोष्ट' अब्बल छँदैछ, विषयवस्तुका दृष्टिमा पनि विविधतायुक्त र माथिल्लो स्तरको छ। विगत १५-१६ महिनाबाटै छु होला म 'आकारपोष्ट'को नियमित पाठकको रुपमा र 'आकार' को लेखनशैलीमा आएको परीवर्तनलाई नजिकबाट हेरिरहेको छु। पहिला विषयवस्तु राम्रै टिपेपनि लेखाई अलि रुखो र उत्तेजनात्मकमात्रै हुन्थ्यो। अहिले लेख्ने शैली पनि ज्यादै सुन्दर भएको छ। अझ प्रगति र सफलताको कामना गर्दछु।
यो 'वाह! क्या लेख्नुभयो! दामी छ!' जस्तो खाले एक हरफे प्रतिकृया मलाई पनि मन पर्दैन। म त सकेसम्म छूचो मुख पार्ने र जति राम्रो भएपनि आलोचना गर्न ठाऊँ खोज्ने कोशिश गर्छु त्यसैले:)
nice to read about your blogging life aakar.
तपाईंको ब्लग पढ्नु मन लागेर क्लिक गरेको ' आकार' पोस्ट मा खोइ आउँदैन त ! ?
कि निर्माणधिन परिस्थितीमा पो हुनु हुन्थियो कि !
आकार ब्लग कसरी पढ्न सकिन्छ ? कृपया जानकारी दिनु भए आभारी हुने थिए ।
( म कप्युटर - प्राबिधिक तिर एकदम कम्जोर छु , कतै मैले नै पो जानिन कि ! )
लुना जी,माथी यो पोष्टको अन्तमा उहाँको ब्लगको ठेगाना राखीएको छ । वा तपाईले सिधै यहीँ क्लिक गर्दा पनि हुन्छ । लिन्क राख्‍न सम्झाईदिनु भएकोमा धन्यवाद ।
धेरै धन्यवाद है :)
निकै रोचक रहेच आकार को को ब्लग । अब बेला बेलामा फुर्सद निकालेर हेर्ने नै छु ।
( आकार जि को मेहनत प्रस्ट देख्न सकिन्छ त्यहा ,ढिलो किन नहोस् मेहनत को फल अन्तगोत्बा मिठो हुन्छ । तपाईंको मेहनत ले मिठो फल पाओस , हिर्दय देखी नै शुभ कामना )
luna ji, do you have your blog?
if not, we expect you to set up blog.
I can see that you are extremely creative.
sorry to bother you but its justasuggestion. I want more and more female blogger to make our voice loud.
हिर्दय देखी नै धेरै धन्यवाद यसरी सहयोग को प्रस्ता ब राख्नु भएकोमा ।
केही महिना अघी दिपक जि ( दिपक जडि त ) ले पनि 'ब्लग खोल प्राबिधिक समस्या मा म सक्दो सहयोग गर्ने छु ' भन्नु भएको थियो ।
आज तपाईंले भन्नु भो । तपाईंहरुलाई पुन्:हिर्दय देखी नै धन्यवाद ।
मैले ब्लग नखोल्नुको कारण अब ब्लग बनाइ सके पछी त्यसमा बेला बेलामा सामाग्री पस्कनु पर्‍यो , यसको लागि यथेस्ट समय पनि दिनु नै पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ । समय पनि प्रमुख समस्या भएकोले मैले ब्लग खोल्ने आट गरेकी छैन ।बरु साथीहरुको ब्लग मा कमेन्ट लेख्दै झगडा गरुला भनेर बसेकी छु :) ( कहिले काही त्यसतो पनि हुन्छ :) )
अहिले सम्म लेख पनि दिन सकिराख्या छैन ।( कहिल्यै लेखेको भए पो ! )तर कमेन्ट दिन चाँही खुब मज्जा आउछ । सजिलो पनि ( अल्छिले धेरै कुरा जान्या हुन्छ रे भन्छन म चाँही अल्छि नै भएर त होइन किनकी मैले समय निदाउने बेलामा मात्रै पाउछु ।) अब यतिका लेखी सके के लाज मा नि मा नि ढा ट्नु !मुख्य कुरा लेख्ने ढंगइ छैन मेरो !!!
१० हरफ लेख्न त सक्छु मज्जाले त्यो भन्दा बढी लेख्नु पर्‍यो भने ४ कक्षा पढ्ने जस्तो पो हुन्छु म त !
आ'त्यही भएर ब्लग नखोल्ने विचारमा छु ।यतिका ब्लग चौतारी - फूल्बारिहरु छन बरु उनैका फूल्बारिमा घास - फूल - काडा भएर बसिदिने बिचार गरेकी छु ।
मेरो मनले मानेन है पुन : तेस्रो पल्ट् धन्यवाद दिन मन लाग्यो तपाईं लाई अर्चना जि ,आफ्नो समय लाई थाती राखेर दुई छ्ण भने पनि मेरो लागि सहयोग को प्रस्तव राख्नु भएकोमा । तपाईंको उदार हिर्दय लाई स्बेत सलाम ।
अर्चनाजी, महिलाले चलाएका ब्लग धेरै हुनु भन्दा मात्रै पनि महिला सहभागिता वा महिलाहरुको लेख यथेष्ट पस्किन सके मात्र पनि राम्रो नि अहिले को लागि मात्र त। सहभागिता बढ्यो भने गुणस्तरीयता पक्कै बढ्नेछ । अनि बल्ल तपाइहरुले सोचेको कुरा हासिल गर्न सक्नु हुन्छ । मैले केहि महिला ब्लगरहरुको ब्लग हेर्ने गर्थे कहिले काहि, तर मुख्य समस्या बेला बेलामा अपडेटको कमी नै देखे। अर्थात धेरै ब्लगहरुमा नया कुराको आशामा धेरै दिन क्लिक गरिरहदा पनि पुरानै सामाग्री । तपाइको पनि म आकल झुकल हेर्ने गर्छु ।
अनि लुनाजी म आफै पनि १-२ वर्ष पहिले आफ्नो ब्लग राखु कि भन्ने सोचेको थिए । तर आफ्नै ब्लगलाई आँफुले नै न्याय गर्न सकिदैन कि जस्तो लाग्यो र चुपचाप बसें । अनि जब दौतरीको कन्सेप्ट साझाबाट फुर्यो तब बेला बेलामा आफुले टाकन टुकन लेख्न थाले। त्यसैले मेरो भनाई के हो भने एउटा स्पष्ट उद्देश्य भयो भने, जागर, टेक्निकल ज्ञान भयो भने र निश्चित समय दिन सकियो भने ब्लग चलाएको मर्म पुरा हुन्छ । नत्र हाम्रा नेताहरुले सरकार चलाए जस्तै होला !
लुनाजी लेख्ने बिचार छ भने दौतरी बाटै शुरु गर्नुस न यसो हामिले पनि तपाइको लेख पढ्न पाइयोस, ढंग त लेख्न थाले पछि आउंछ !
हो हो ल, लुनाजी ले लेख्नु पर्छ। तपाईको रचनामा हामीले पनि प्रतिकृया लेख्न पाऊं न।
पोस्तक जि ! लेख लेखेर पठाएकी छु तर कसरी कहाँ पठाउने थाहा नभएर कमेन्ट बक्स मा नै पठाएकी छु ।
लुना जि को लेख कमेन्ट बक्स बाट उडेर नया पोस्टमा छापिएको छ। लेख्ने पालो लुना जी को कमेन्ट गर्ने पाल हाम्रो।
ब्लगान केही ब्लगरहरुको इगोको कारण निष्कृय भएको भन्ने आकारजिको भनाइप्रति चित्त बुझेन हो मेरो । मलाइ त त्यस्तो लाग्दैन त हो मित्र सामान्य रुपमा प्रारम्भका केही समय ब्लगरहरुविचको भेटघाट बाक्लीएको थियो ब्लगान मार्फत । त्यसले निरन्तरता नपाएको मात्र हो । यसलाइ जसले पनि निरन्तरता दिनसक्छ । ब्लगान सबै ब्लगरको साझा चौतारी नाम हो । यसमा कुनै एक ब्लगरको हक लाग्ने कुरै छैन । ल आकारजी ब्लगानलाइ मिलेर सकि्रय बनाउन सकिन्छ । यसमा इगो फिगोको कुरो हुन्न । पक्का ।
ब्लगान थियो भन्ने मात्रै सुनेको छु मैले, त्यसभन्दा धेरै त केही थाहा छैन । तरपनि केही का मुखबाट मैले सुनेको कुराहरु हुन्, यी माथि भनिएका कुरा, के पी जी !